पब्जी : आखिर कसरी बिस्तार भयो यस्तो विशाल ‘गेम साम्राज्य’? – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पब्जी : आखिर कसरी बिस्तार भयो यस्तो विशाल ‘गेम साम्राज्य’?
admin September 5, 2020 जीवनशैली	0
काठमाडौँ, २० भदौ । बिश्व हल्लाएकाे पब्जी खेल विश्वभरकाे लोकप्रिय खेल हो। नेपालमा पनि प्रशंसकहरू धेरै छन्। याे खेल एक जापानी ‘थ्रिलर फिल्म ब्याटेल रोयाल’ बाट प्रेरित भएर सिर्जना गरिएको हो जहाँ सरकारले विद्यार्थीहरूको एउटा समूह जबरजस्ती लड्न पठाउँदछ। पब्जीमा, करिब १०० खेलाडीहरू टापुमा प्यारासुटको साथ उफ्रन्छन्, हतियारहरू फेला पार्दछन् र एक अर्कालाई मार्छन् जबसम्म ती मध्ये एक मात्र बाँकी छ।
यो दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी ब्लूहोल कम्पनीले बनाएको हो। यसको डेस्क शीर्ष संस्करण दक्षिण कोरियाली कम्पनीले बनाएको हो। तर चिनियाँ कम्पनी टेंसेंटले आफ्नो मोबाइल संस्करण बजारमा नयाँ नामको साथ केही परिवर्तनका साथ ल्यायो। सयौं व्यक्ति पब्जी खेल एकै साथ खेल्न सक्छन्।
यसमा केहि पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ र नयाँ हतियार किन्नको लागि कुपन खरिद गर्नु पर्नेछ। खेल यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ कि तपाईं जति अधिक खेल्नुहुन्छ, त्यति रमाइलो हुनेछ, तपाईं कूपन र हतियारहरू खरीद गर्नुहुन्छ, जसले तपाईंको खेल अझ राम्रो बनाउँदछ। यो सँग नि:शुल्क कोठा पनि छ र यसको विभिन्न स्तरहरू छन्। धेरै फरक ठाउँमा बस्ने मानिसहरूले यो एकै साथ खेल्न सक्छन् र यो एकैसाथ स्ट्रिम पनि हुन्छ। यो कन्सोलको साथ पनि खेल्दछ।
खेल बजार कति ठूलो छ
विश्वको बारेमा कुरा गर्दै, २०१९ मा गेमिङ मार्केटको मूल्य १६.९ अर्ब डलर हो। यसमा चीनले ४.२ अर्ब डलरको हिस्सा लिएको छ। अमेरिका दोस्रो नम्बरमा, जापान तेस्रो स्थानमा छ भने ब्रिटेन र दक्षिण कोरिया। यी तथ्याङहरु statista.com बाट हुन्। यो उद्योग भारतमा पनि तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ, तर अहिले पनि यो एक अरब डलर भन्दा कम छ।
गेमिङबाट कसरी आर्जन हुँदैछ ?
वास्तवमा अनलाइन गेमिङले धेरै तरिकाहरू कमाउँछ। गेमिङबाट पैसा कमाउने एक मोडल भनेको फ्रिमियम हो । त्यो हो, पहिले दुई निः शुल्क र पछि प्रीमियममा किस्तामा भर्नुहोस् । दोस्रो मोडेल हो, यससँग सम्बद्ध वस्तुहरू बनाएर। बच्चाहरू, विशेष गरी उनीहरूसँग सम्बन्धित क्यारेक्टरहरू, टीःशर्टहरू, कप प्लेटहरू, कपडाको क्रेज धेरै बढ्छ।
खेलबाट प्रभावित हुँदा प्रायः ती चीजहरूको खरीद बढ्छ, जुन कम्पनीहरूले पनि कमाउँछन्। र, कमाईको तेस्रो तरीका यसमा आधारित विज्ञापनहरू र फिल्महरू बनाएर हो। धेरै चोटि चलचित्रहरूमा आधारित खेलहरू आउँछन्। फिल्मको लोकप्रियताले खेलको प्रमोशनमा मद्दत गर्दछ र कहिलेकाँही खेलहरूको लोकप्रियताले फिल्मको प्रबर्धनमा मद्दत गर्दछ।
जो मानिसहरू व्यावसायिक रूपमा यो खेल खेल्छन् सरकारको यस कदमले चोट पुर्‍याउन सक्छ। धेरै व्यक्तिहरू जसले धेरै खेलहरू खेल्छन् यूट्यूबमा पनि धेरै लोकप्रिय छन्। त्यस्ता खेलहरू आयोजना गर्नेहरूले पनि धेरै क्षति भोग्नुपर्नेछ। तर टिक्टोकमा प्रतिबन्ध पछि पब्जी बानको चर्चा सुरु भयो। यस्तो अवस्थामा, धेरै व्यक्तिहरूले अन्य खेलहरूमा परिवर्तन गर्न शुरू गरिसकेका थिए।
विश्वको सबै भन्दा बढी नाफा कमाउने एप पब्जी
पब्जी एप एन्ड्रोइड र आइओएस फोन गरि ४०० मिलियन बढी ‘डाउनलोड’ भइसकेको छ। यो रेकर्ड सबै ‘डाउनलोड’ फिचर्सको भन्दा बढी हो। विश्वभरि पब्जीका १०० मिलियन बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्। पब्जी मोबाइल विश्वको सबै भन्दा बढी नाफा कमाउने एप बनेको छ।
सबै भन्दा बढी नाफा कनाउने एपको सूचीमा रहेका ‘प्ले स्टोर’ र ‘एपस्टोर’लाई पनि पछि छोड्दै यो एप पहिलो बनेको छ। ‘प्लेस्टोर’ र ‘एप स्टोर‘को रिभ्यू’ ७६ मिलियन डलर रहेको छ।
यूएई-काठमाडौँ २८ वटा उडान तालिका यस्तो!
आयो यस्तो अचम्मकाे तथ्याङ्कः दुखी आत्मा हुनेहरूकाे देशमा छैठाैंमा नेपाल!
भाई राकेशको अन्तिम विदाई पशुपति आर्यघाटमा अन्त्यष्टि, थाम्न सकेनन् राजेशले आफुलाई (भिडियो हेर्नुस्)
सुखी र समृद्ध जीवन यापनका लागि खर्च कटौती गर्न अपनाउनुस यस्तो तरिका